Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si n’ụlọ nzukọ ahụ pụọ, ha gawara n’ụlọ Saịmọn Pita. Ha hụrụ na oké ahụ́ ọkụ ji nne nwunye Pita aka ọjọọ. Ha rịọrọ Jizọs ka o nyere ya aka. N’ihi ya, Jizọs garuru ebe o dina, jide ya n’aka, ma selite ya. Nwaanyị ahụ gbakere ozugbo ahụ. Ọ malitekwara ijere Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ha na ya so ozi. O nwekwara ike ịbụ na o bidoro isiri ha ihe ha ga-eri.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Arụọ Ọtụtụ Ọrụ Ebube na Kapaniọm
jy isi 23 p. 60-61